Midowga Yurub oo codsi u diray Madaxweyne Farmaajo – STAR FM SOMALIA
Ergayga Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ugu hambalyeysay guushiisa saacado ka hor Caleema saarkiisa.
Federica oo Madaxweyne Farmaajo kula hadashay qadka Taleefanka, ayaa u rajeysay inuu ku guuleysto xilkiisa soona dhaweysay xil wareejintii sida nabadda ahayd ku dhacday.
Waxay ku celisay Federica in Midowga Yurub ay mar walbo u taagan yihiin horumarka Somaliya, iyo arrimaha dib u soo celinta amniga, waxayna intaasi ku dartay in ay kaalin weyn ka qaadanayaan soo kabashada dhaqaalaha Somaliya.
Federica ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka codsatay in dib u habeyn iyo isku shaandheyn ku sameeyo arrimaha dhaqaalaha Somaliya gaar ahaan dib u eegista dhinaca sharciga, waxayna sidoo kale codsatay inuu la dagaallamo Musuqa.
Midowga Yurub ayaa la ogsoon yahay in qarashaadka ku baxa 6-kun iyo 8 boqol oo Somali ah ay bixiyeen sida ay sheegtay Federica Mogherini.
Wafuud kala duwan oo ka soo qaybgalaysa xaflada caleemo saarka Madaxweyne Farmaajo